Iphupha ngeTow Bar Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ibarari inokubandakanya ibha enye okanye ezimbini. Yinxalenye yenqwelo etsalwayo edibanisa izilwanyana kwaye isetyenziselwa ukutsala nokuqhuba esi sithuthi. Kwimeko yeenqwelwana ezirhuqwayo, i-barbar iqhagamshelwe ngokusisigxina kwisithuthi ngee-asi kwaye iseta unxibelelwano kunye nokuhanjiswa kwetreyila yesithuthi esitsalayo.
Njengomgaqo oqhelekileyo, i-barbar yenziwe ngentsimbi. Nangona kunjalo, inokwenziwa ngomthi, ngakumbi kwimeko yeekhareji okanye iinqwelwana. Kwiinqwelo, nangona kunjalo, izilwanyana eziyilwayo azisebenzisi i-barbar ukutsala inqwelo, kodwa ukuyimisa, oko kukuthi, ukuphula kunye nokuqhuba.
1 Uphawu lwephupha «idrawbar» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «idrawbar» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «idrawbar» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «idrawbar» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukusuka kwimbono ngokubanzi, iphupha malunga nedrawbar ikakhulu ibhekisa kuloo Hambisa kunye umntu oleleyo ebomini bokwenyani. Umntu kufuneka acinge ngophuhliso lomntu kubomi bokuvuka. Mhlawumbi iindlela ezintsha kufuneka ziqwalaselwe okanye wanelisekile yinkqubela esele uyenzile ukuza kuthi ga ngoku.
Ukubona kwe-barbar enqwelweni okanye emotweni njengophawu lwephupha kunokubonisa ukuba umntu ophuphayo ukulo el mundo yomlindo. ngempumelelo iya kuba. Unokuba nohambo phambi kwakho. Umdwebo ephupheni, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, unokufuzisela ukufezekiswa kweenjongo. Idreyini eyaphukileyo ephupheni izisa ukuphoxeka. Umphuphi akazokwazi ukwenza izicwangciso zakhe.
Nabani na okhubeka ngaphaya komngxunya wemoto ephupheni lakhe uya kuba mnye kungekudala. iindaba ezibuhlungu fikelela. Ukulawulwa kwemoto efana nephupha kungabonisa ukuba umntu oleleyo uya kuxhomekeka kwabanye abantu ngenxa yendlala. Kule meko, kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ingaba imoto itsalwa zizilwanyana, ezinje ngeenkomo, okanye ngumntu.
Izinto ezinokubakho zinokubonelela ngolwazi olubalulekileyo ekuchazeni ngokubanzi isimboli yephupha "yedrawbar". Isarha yomthi ephupheni ingabonisa ukuba usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe ngaphambi kokuphumelela. Umdwebo wesinyithi njengephupha ngokubanzi umele ubutyebi, obuya kuhamba nempumelelo ekuvukeni ubomi.
Uphawu lwephupha «idrawbar» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha «i-barbar» inokutsala umdla kwinto yokuba lowo unyuliweyo Indlela yobomi lomntu uphuphayo akahambelani namandla akhe angaphakathi. Ngokukodwa ukuba kukho iingxaki kwi-drawbar yesithuthi ngelixa ulele, iphupha lingaqondwa njengophawu.
Ukuba ephupheni i-barbar ayisebenzi kwaye umntu oleleyo akanakuqhekeza nge-trailer yakhe, mayibe yeyakhe Ukuthintela yazi kwihlabathi lokuvuka. Kungenxa yokuba bayakuthintela ekusebenzeni kwiminqweno yakho okanye kwidrive yakho yangaphakathi.
Ukuba umphuphi utyelele umasifundisane ephupheni lakhe ukuze alungise i-barbar, kungacetyiswa ukuba abe kunye neyakhe iitalente zokuyila uxakeke kakhulu. Kungenxa yokuba ezi ngoku zifuna ingqalelo engakumbi kubomi bokuvuka.
Uphawu lwephupha «idrawbar» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika umfanekiso wephupha "isarbar" njengophawu lwe ingaphakathi phatha labaphuphi kwizinto zokomoya. Ke, ngephupha lakho, kuya kufuneka wazi ukuba yintoni ekuvumela ukuba uqhubele phambili kwinqanaba lobomi bakho.